निजी अस्पतालले किन मानवीयता बिर्सिए ?
संसार कोरोनाको महामारीमा तड्पी रहेको बेला हामी नेपाली यसलाई मजाकको रुपमा लिइरहेका छौं । कुनै पनि रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा पहिले त्यसलाई आउनै नदिदा धेरै सुरक्षित भइन्छ हामीले जानेकै कुरा हो । तर पनि हामी खेलवाड गरेका छौं । जुन लापरवाहीले जीवन कतिबेला नष्ट हुन्छ र मलामी पनि नपाउने अवस्था हुन्छ थाहा छैन ।
अहिले देशका अभिभावक प्रधानमन्त्री बिरामी छन् । राष्ट्रपतिले दुई महिनाको तलव कोरोना बिरुद्ध कोषलाई दिएर चुप हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षका नेताको कुरै छोडम् अहिले सहमतिको सरकार गठनका कुरा उठाउंदै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्री अब भान्छामा जान पनि पिपिई नभइ हुन्न भन्ने भए भनेर खिल्ली उडाउँदै हुनुहुन्छ । एकजना सचिव आउँदो बजेटमा कोरोना बिरुद्ध बजेट पेश गर्न तम्तयार हुनुहुन्छ । एउटा मन्त्रीले चिन सिकिस्त हुँदै गरेको बेला नेपाललाई कोरोना फ्रि जोन घोषणा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अर्का मन्त्री चिन र भारतले सुरक्षाका उपाय अपनाई सकेकोले नेपाल सुरक्षित छ भनेर बास्नु भयो अनि अर्का मन्त्रीले नेपालीमा प्रतिरक्षा पावर टन्नै भाकोले डराउन नपर्ने अभिब्यक्ति दिनु भयो ।प्रतिपक्षका रामचन्द्र जी त सरकार गठनै गर्न पाए कोरोना भगाईन्थ्यो जस्तो गर्दैछन् । अनि हामी जनता लकडाउनको उल्लंघन गर्दै चोक, गल्लीमा के छ भन्दै लखर लखर बिना कारण घुमिरहेका छौं ।
चीन सतायो, ईटाली ध्वस्त पार्दै अब स्पेनलाई जाक्दै छ कोरोनाले ।अमेरिकाले घमण्ड देखाउँदा तिव्र वेग लिएको छ । बेलायतमा पनि लापरवाही गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री लाई समेत समात्यो । विश्व त्राहिमाम छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामी नेपाली यसलाई किन हल्का रुपले सोचिरहका छौं ?
हाम्रो अवस्था कस्तो छ ?
अस्पताल जाँदा सामान्य ज्वरो, खोकि भय पनि हेर्न मान्दैनन् । निजि अस्पताल त कसाइखानाको ब्यवहार गर्दैछ । जाँच गर्न अस्पतालमा डाक्टर लाई आवस्यक सुरक्षा साधन छैन । कसरी स्वास्थ्यकर्मी खटेका छन् ? उनीहरु आफ्नो जीवन नै बन्दुकको नालमा राखेर बिना हतियारका लडाकु बनेर लडेका छन् । उनै स्वास्थ्यकर्मी लाई हामी भाडामा पनि बस्न नदियर अमानविय व्यवहार गरिरहेका छौं ।
संसारभरका सरकार प्रमुखहरुले दिनदिनै जसो जनताको नाममा बक्तब्य निकालेका छन् तर हामी अभिभावक बिहिन जस्ता भयका छौं ।
भारतले लकडाउन सफल पार्न यानी कि कोरोना जित्न अति गरिब तथा मजदुरहरुको लागि तीन महिना खान फ्रि खुवाउने निर्णय गर्यो त्यसको लागि रकम बिनियोजन गरिसक्यो ।दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले मिडियाहरुलाई हामी कहानेर गल्ति गर्छौं औंल्याइदिनु भनेर निर्देशन समेत दिए । हामीकहाँ यस्तो बोल्ने नेता छन् र ? छैनन् ।
अमेरिकाले हामी अमेरीकि लकडाउन गर्न जन्मेको हैन भनेर घमण्ड देखाए पनि अन्ततः कोरोनाले झुकाइछाड्यो । केन्द्रविन्दु बन्यो ।
चीन, कोरिया, ताइवान, जापानले कसरी कोरोनालाई हराउंदै छन् त ?
नागरिक अनुशासित भैदिए देश सुशासित हुन्छ ।नागरिक नै अनुशासनहिन भए पछि सरकारको केही लाग्दो रहेनछ । चिनलेगरेको लकडाउनमा नागरिकले पुर्ण साथ दिए ।जापानमा पनि भएको त्यही हो ।
तर हामी नेपाली अनुशासनको पालना गर्नै बिर्सेका रहेछौं । यस्तो कठिन घडीमा आफै बाँच्नको लागि पनि केही दिन घरमा बस्न सक्दैनौं ? हरेक बहाना बनाएको छ कर्फ्यु देखि पनि डर छैन, नेपाल बन्द गर्दा बेलुका पांच बजेदेखि खुला गर्ने एउटा नियम बनेको थियो त्यस्तै गरि रोगलाई पनि नेपालबन्द ठानेर गल्ली चोकहरुमा हंगामा लगाउने ? प्रहरीले कुट्यो कुट्ने प्रहरीलाई कारवाहीको माग गरे । अनि त्यो भिडियो बनाउनेले लकडाउनको अवज्ञा गर्यो कि गरेन ? लकडाउनको अवज्ञा गर्नेलाई सजाय तोकिएको छ त्यो सजाय उनीहरुलाई दिने कि नदिने?कतै कुनै सीप नलागे पछि कुट्नै पर्ने भयर कुटेका हुन् । डिउटी निर्वाह गरेका छन् धन्यवाद भनौं ।
सबै कुरा सरकारले गरेन भनेर बाह्र हात उफ्रने हामी नागरिकको कुनै दायित्व छ कि छैन ? बिपद् को बेला एक छाक खाएर पनि टार्न सक्नु पर्छ । त्यो पन आफ्नै जीवन बचाउनको लागि केही बेर कष्ट गर्न सक्नु पर्यो नी ।सरकारले लगाएको नियम पालना गर्दैनौं भने कस्ता नागरिक हामी ?
न्युजिल्यान्ड सरकारले एक महिनाको लकडाउन गरेको छ ।यहाका नागरिक एकजना पनि बाहिर निस्केका छैनन् । बिदेशबाट आएका कामदारहरु समेत काम ठप्प भयका कारण बाहिर निस्केका छैनन् ।आशा छ यहाँ बिकराल रुप नदेखाउला कोरोनाले । यहाका जनतालाई सरकारको आदेश पालना र आत्म रक्षा कसरी गर्ने भन्ने बखुबी जानकारी रहेछ ।यहाँ जस्तै हामीले पनि नियम उलंघन नगरौं त ।
भौगोलिक बिकटताका कारण सरकारले प्रत्यक्ष ब्यावस्थापन गर्न नसक्ला । त्यसैका लागि स्थानिय सरकार बनाएको हो स्थानीय सरकारलाई पनि झकझकाउनु पर्छ । भारतबाट आएका केही नेपाली नागरिकले अस्ति मात्र सुदुरमा स्वास्थ कर्मी माथि नै हातपात गरे । नागरिकको कर्तब्य त्यही हो त ?
हिजो अंग्रेजसंगको युद्धमा लडाइँ गरेका नेपालीले देश रक्षाका लागि पानी पनि नखाई लडेका थिए युद्ध जिते आज हाम्रो शत्रु बनेर आएको कोरोनासँग त हामी घरभित्र बसेर लड्ने हो, लडौं न ।
एक छाक नखाएर एकछिन बाहिर नडुले मर्दैनौ तर कोरोनाले थिच्यो भने ? सरकारले पनि अर्थतन्त्र, राजनीति यताउता नहेरी नागरिकको सुरक्षामा ध्यान देओस् । कमाउने, कमिसनतिर ध्यान नजाओस् ।हाम्रो स्वामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी ,सुरक्षाकर्मिलाई प्रोत्साहित गरौं । हतोत्साहित नपारौं । एकअर्कालाई सहयोग गरौं सुरक्षा कवच अपनाऔं ।कोरोना भगाऔं । आफु पनि बाँचौं अरुलाई पनि बचाऔं ।